नछुटाई पढ्नुहोला पाँचऔंलेमा हुन्छन् यस्ता औषधीय गुण ! यस्तो छ प्रयोग गर्ने तरिका – Annapurna Daily
नछुटाई पढ्नुहोला पाँचऔंलेमा हुन्छन् यस्ता औषधीय गुण ! यस्तो छ प्रयोग गर्ने तरिका
On Apr 23, 2022 585
काठमाडौँ । नेपालको हिमाली क्षेत्रमा पाइने पाँचऔंलेबारे धरैलाई थाहा नहुन सक्छ । पाँचऔंलेमा धेरै किसिमका औषधीय गुणहरु हुन्छन् । नेपाली नाम पाँचऔंले भए पनि स्थानीय भाषामा यसलाई हत्ताजडी, पाँच पाते लगायतका नामले समेत चिनिन्छ । आयुर्वेदमा यसलाई निकै महत्वका साथ लिइन्छ ।
यसको गाना हातको औँला जस्तै पाँच भागमा विभाजित हुने भएको हुँदा यसलाई पाँचऔंले भनिएको हो । यो एक लहरा प्रजातीको वनस्पति हो। यो नेपाल सहित पाकिस्तान, भारत, भुटान चीन लगायतका देशमा पाइन्छ । यसलाई पछिल्लो समय जडिबुटीको व्यापार गर्नेहरुले राम्रो मुल्यमा विभिन्न देशमा निर्यात समेत गर्ने गरेका छन् ।
२ हजार ५ सय मिटको उचाइदेखि ५ हजार मिटरसम्मको उचाइमा पाइने यस वनस्पतिको एउटा मात्र डाँठ हुन्छ भने यसको जरामा गाना फल्दछ । यसको गाना पन्जा जस्तो आकारको पाँचवटा भागमा बाँडिएको हुन्छ। यो वनस्पतिको फूल गुलाफी तथा प्याजी रंगको हुन्छ । विभिन्न प्रकारका रोगहरु निको पार्ने भएकाले आयुर्वेदिक औषधिको रुपमा यसलाई प्रयोग गरिन्छ । यो वनस्पतिको गानो औषधिका रुपमा प्रयोगमा आउँछ ।
पाँचऔंलेको प्रयोग गर्ने तरिका: पाँचऔंलेको जरालाई पिसेर लेप बनाइ लगाउन सकिन्छ । यसले काटेको, पोलेको घाउ चाडै निको हुन्छ । काटेको ठाउँमा रगत बेगेको छ भने यसको लेप लगाउँदा रगत बग्न बन्द हुन्छ ।
अन्य औषधीय गुण: लेक लागेमा,स्मरण शक्ति बढाउन,पिसाव सम्बन्धी समस्या निको पार्न,पक्षघात भएमा,पेट दुखेमा,जीउ दुखेमा,यौ’ न शक्ति वा उत्तेजना बढाउन,छालालाई मुलायम बनाउन, शरीर चिलाउने रोक्न,मधुमेह, शुक्राणुको संख्या बढाउन
यो पनि,घाँटीमा केही अड्किएमा लाली गुराँस हुन्छ अचूक औषधि ,जानीराखौं यस्ता छन् फाइदै फाइदा, लाली गुराँस नेपालको राष्ट्रिय फूल पनि हो । लालीगुराँस फूल मात्र होइन औषधि पनि हो । यसमा औषधीय गुण हुन्छ । यस फूलप्रति हाम्रो भावनात्मक प्रेम र सम्मान पनि छ । गुराँस हेर्नमा जति राम्रो छ, उत्तिकै गुणकारी पनि । गुराँसको जुस बनाउनेदेखि केहि औषधिय काममा पनि प्रयोग गरिन्छ ।